Onye na -emepụta teepu ọla kọpa kacha mma na ụlọ nrụpụta | Civen
Teepu foil teepu nwere ike kewaa otu na okpukpu abụọ conductive ọla kọpa foil:
Ihe mkpuchi ọla kọpa nwere ihu abụọ na-ezo aka na foil ọla kọpa nke nwekwara mkpuchi nrapado, mana mkpuchi nrapado a na-eduzi, yabụ a na-akpọ ya foil ọla kọpa nwere ihu abụọ.
Otu akụkụ bụ ọla kọpa, akụkụ nke ọzọ nwere akwụkwọ mkpuchi ； N'etiti bụ nrapado acrylic na-enwe mmetụta dị mbubata. Foil ọla kọpa nwere nrapado siri ike na elongation. Ọ na -abụkarị n'ihi ihe ọkụ eletrik dị mma nke ọla kọpa na n'oge nhazi ọ nwere ike inwe mmetụta dị mma; nke abụọ, anyị na -eji nickel a na -etegide anya iji kpuchie nnyonye anya electromagnetic n'elu foil ọla.
Enwere ike iji ya n'ụdị transformers dị iche iche, ekwentị mkpanaaka, kọmpụta, PDA, PDP, ndị na -enyocha LCD, kọmpụta akwụkwọ ndetu, ndị na -ebi akwụkwọ na ngwaahịa ndị ọzọ eji eme ụlọ.
Ọdịdị nke ọla kọpa dị elu karịa 99.95%, ọrụ ya bụ iwepụ nnyonye aka electromagnetic (EMI), wepu ebili mmiri electromagnetic na -emerụ ahụ n'ahụ, na -ezere nnyonye ọkụ na -achọghị ugbu a.
Ke adianade do, electrostatic ụgwọ ga -grounded. nwere njikọ chiri anya, ihe na -eduzi ihe dị mma, enwere ike ịbe ya nha dị iche iche dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
Isiokwu 1: Njirimara ọla kọpa
Ọkọlọtọ（Ọkpụrụkpụ ọla kọpa）
0.018mm Otu akụkụ
0.018mm ihu abụọ
0.025mm Otu akụkụ
0.025mm ihu abụọ
0.035mm Otu akụkụ
0.035mm ihu abụọ
0.050mm Otu akụkụ
0.050mm ihu abụọ
Ihe edeturu:1. enwere ike iji ya n'okpuru 100 ℃
2. Mgbatị dị ihe dịka 5%, mana enwere ike gbanwee ya dịka nkọwa ndị ahịa siri dị.
3. Ekwesịrị idobe ya n'ime ụlọ okpomọkụ ma enwere ike ịchekwa ya ihe na -erughị otu afọ.
4. Mgbe ị na -eji ya, dobe akụkụ nrapado na ụmụ irighiri achọghị, ma zere iji ya ugboro ugboro.
Nke gara aga: Ihe ịchọ mma ọla kọpa
Osote: NickelFoil Electrolytic dị ọcha
Teepu ọla kọpa
Ọla kọpa foil
Teepu mkpuchi ọla kọpa
Mpekere ọla kọpa
Mpekere ọla kọpa dị gịrịgịrị